မောင်ချစ်: သမိုင်းတွင်မယ့် သမိုင်းဝင် စစ်ကိုင်းမြို့ရဲ့ ကျက်သရေဆောင် ရာဇမဏိစူဠာ ကောင်းမှုတော် စေတီတော်မြတ်ကြီး.
သမိုင်းတွင်မယ့် သမိုင်းဝင် စစ်ကိုင်းမြို့ရဲ့ ကျက်သရေဆောင် ရာဇမဏိစူဠာ ကောင်းမှုတော် စေတီတော်မြတ်ကြီး.
အားလုံးသိကြတဲ့ စစ်ကိုင်းက ကောင်းမှုတော်၊ အဲသည်ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးကို မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၉၉၈ ခုနှစ်က သာလွန်မင်းတရားကြီး ၁၂ နှစ်ကြာ အချိန်ယူ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပြီး စေတီတော်အမြင့် ၁၈၈ ပေ၊ အောက်ခြေလုံးပတ် ပေ ၈၈၀ကျော် ရှိတယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။စစ်ကိုင်း ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးလို့ ဆိုလိုက်ရင် မျက်လုံးထဲမှာ စေတီလုံးပြည့် ထုံးသင်္ကန်း တဖွေးဖွေးနဲ့ မြင်ယောင်လာမိကြမှာပါပဲ။ ဒါကလည်း အစဉ်အဆက် ဘုရားကြီးရဲ့ ထုံးဖြူဖြူကလေးကိုပဲ ပင်ကိုယ် အသွေးအရောင်အဖြစ် မျက်လုံးထဲက မထွက်နိူင်အောင်၊ စွဲနေအောင် ဖူးလို့မဝ ဖြစ်ခဲ့ကြရတာမို့ပါ။
သာလွန်မင်းတရားကြီးရဲ့ သမီးတော်အပေါ် ဆက်ဆံပုံနဲ့ လွှတ်တော်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ ယနေ့ မျက်မှောက်ခေတ် လတ်တလော ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ဆီနဲ့ရေလို ကွာခြားလှပါတယ်..။ ထို့အတူ တစ်ချို့သော သတင်းတွေမှာပါတဲ့ သာလွန်မင်းတရားကြီး ဝင်စားတယ် ဆိုပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ် အမွှန်းတင် ပြောဆိုနေတဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုသူနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်စေချင်ပါတယ်..။ ဘာပဲပြောပြော ခုလိုအခြေအနေမှာ ကွယ်လွန်သူ ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်းကိုပဲ သတိယ အောက်မေ့မိပါတယ်..။ ဆရာကြီးတာ ရှိနေရင်တော့ ဆိုပြီး....